कति सहने ? हरेक वर्षको वर्षामा भारतले यसरी डुबाउँदै आएको छ नेपाललाई (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
कति सहने ? हरेक वर्षको वर्षामा भारतले यसरी डुबाउँदै आएको छ नेपाललाई (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jul 13, 2020
काठमाडौं, २९ असार । साउन लाग्दै गर्दा वर्षाको बेग पनि बढ्दै गएको छ । अब नेपालका तराई–मधेस जिल्लाहरुमा डुबानको खतरा बढ्दै गएको छ ।
कतिपय स्थानहरु डुबानमा पर्न थालिसकेका छन् । वर्षेनी हुने प्राकृतिक विपत्तिमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भारतले नेपाली सीमा नजिकै ठूल्ठूला बाँध र तटबन्धहरु निर्माण गरेको छ ।
जसका कारण तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानमा पर्ने गरेको छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
दुईदेशको सीमा नजिकै सडकरुपी बाँध र तटबन्धहरु बनाउँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । यसैलाई उनले भारतीय हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका हुन् ।
डुबान नियन्त्रणका लागि नेपालले भारत समक्ष प्रयास नगरेको भने होइन, पटक–पटक सहमतिका प्रयास भएपनि प्रगति हुन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका डुबान समस्या समाधान गर्न दुबै देश सहमत बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा आउँदा ‘भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा तपाईंको मन दुख्छ कि दुख्दैन’ भनेरसम्म सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डुबान समस्या समाधान गर्न मोदीको ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्तिको आठौंं बुदाँमा यो विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
भारतीय बाँधका कारण नेपालतर्फ बर्षेनी बर्खाका बेला मानवीयसँगै अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति हुँदै आएको छ, नेपाली जनता वर्षौंदेखि यो समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
त्यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तराई–मधेसको भूभागमा बर्षेनी हुने डुबान समस्या उठाउँदै समाधानका लागि पहल गर्न मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसपछि संयुक्त टोली बनाएर प्रभावित क्षेत्र अवोलकन गरिने दुबै देशबीच सहमति जुटेको थियो । सिंँचाइ, बाढी नियन्त्रण र डुबान समस्या समाधान गर्न प्राविधिक कार्य र निरन्तर द्विपक्षीय परियोजनाहरुको कार्यान्वयन सहकार्यमा तीव्रतासाथ गर्ने अघि बढाउने सहमति समेत भयो । तर, हालसम्म न अध्ययन नै भयो न त समाधानका लागि प्रयास नै ।
भारतले नेपाललाई डुबानमा पार्ने गरी बनाएका बाँधः
–मेची नदीमा दशगजा नजिकै बजारुजोत क्षेत्रमा बनाइदै गरेको बाँध
–मेचीनगर वडा नम्बर ७ कै नजिक मेची पुलको पूर्वदक्षिण क्षेत्रमा करिब ५ सय मिटरको बनाइएको बाँध
–सप्तरीको तिलाठीमा दशगजालाई मिचेर भारतले बनाएको बाँध
–प्रदेश दुईका सबैजासो जिल्लामा भारतले अनधिकृत बाँध बनाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा
–रौतहटको इशनाथ नगरपालिका नजिकको दशगजा मिचेर भारतले बनाएको बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा
–प्रदेश पाँचका अधिकांश जिल्ला पनि भारतले बनाएका बाँधबाट डुबानमा
पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका सीमावर्ती गाउँहरु हरेक वर्ष डुबानमा पर्छन् । यी बाहेक पर्साको ठोरी, रामनगर, बर्मानगर, सिकारीवास, इच्छानगर, बुद्धनगर, माडी बस्ती उच्च जोखिममा छन् ।
मुखियापट्टी मुसहरनिया–१ को मुसहरनिया टोल पनि बिग्ही र जमुनी नदीको बाढीबाट जोखिममा छ । बाँकेको नरैनापुर त झनै डुबानको जोखिममा छ ।
भारतीय कोसी योजनाले तीन वर्षअघि कोसी ब्यारेजभन्दा तल पूर्वबाट बग्दै गरेको नदीको पाइलट च्यानल खनेर पश्चिमी तटबन्ध नजिक ल्यायो । यसबाट नेपालतर्फ गोबरगाढा टापु डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
हनुमाननगर, रम्पुरा मल्हनिया, टिकुलिया लगायतका बस्तीका ३ हजारभन्दा बढी परिवारको घरमा पानी पस्ने गर्छ । भारतले त्रिवेणीमा बाँध बनाएर सिँचाइका लागि पानी लगेको छ ।
यसबाट धेरै भूभाग कटान हुने, डुबानमा पर्ने समस्या रहेको छ । हरेक वर्ष भारतका कारण दक्षिणी सीमावर्ती नेपाली भूमि मेचीदेखि महाकालीसम्म डुबानमा पर्ने गरेको छ ।